( ယမ်းငွေ့များဖြင့် ပြယ်စေချင် ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ( ယမ်းငွေ့များဖြင့် ပြယ်စေချင် )	13
( ယမ်းငွေ့များဖြင့် ပြယ်စေချင် )
Posted by တောင်ပေါ်သား on Mar 23, 2015 in Creative Writing, Poetry | 13 comments
အနှစ်မရှိလေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး စကားဝိုင်း
ကဲ ကောင်းကြသေးရဲ့ လား
Kaung Kin Pyar says: ဒီကဗျာလေး ဖတ်ရတော့ ဆရာခိုက်ရဲ့ ဒီစစ်ပွဲပြီးရင် ကျောင်းပြန်တက်ချင်တယ် ဆိုတာလေး သတိရသွားတယ်…။
Wow says: ကိုယ့်သွေးချင်းတွေ ဒီလိုဒုက္ခခံနေရတော့ အူးမျိုးလဲ စိတ်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး… တွေ့ဖူးသလောက် တိုင်းရင်းသား တော်တော်များများက စိတ်ထားဖြူစင်ရိုးသားကြတယ်.. စစ်တပ်နဲ့ တရုပ်ကြား အသုံးချခံ ဖြစ်နေတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: ကောင်းကင်ပြာ နဲ့ WOW ရေ
လူကြီးတွေမှာလည်း အိုးပစ်အိမ်ပစ်နဲ့ စီးပွားပျက်
ဒီနောက်ကွယ်မှာ အသပြာအတွက် ၃ ဘက်လုံး ပါနေကြတယ်
( စစ်တပ် + ကေအိုင်အေ + သောက်တရုတ် )
naywoon ni says: အင်း ဘယ်​လို​ပြောရမှန်း​တောင်​မသိ ။ တစ်​ခါက နံမယ်​ကြီး ၀တ္ထု တစ်​ပုဒ်​နာမယ်​က ” ကိုယ့်​ဘက်​က ကြည့်​​တော့ သူရဲ​ကောင်း ……………..” ကျုပ်​က​တော့ သုံးဖက်​စလုံး သစ္စာ​ဖောက်​​နေတာလို့ပဲ မြင်​တယ်​ ။ မြန်​မာပြည်​ကို အ၀ီစိ ဆွဲချ​နေကြတာ ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1292
uncle gyi says: တရုတ်ကစည်းအပြင်ကလူ
naywoon ni says: အဲ့ စည်းအပြင်​က တရုပ်​က ကစားကွက်​ကို အဓိက ပုံ​ဖော်​​ပေး​နေတာ ။ အသိဉာဏ်​မဲ့တဲ့သူ​တွေက အမိန့်​​ပေး ပြီး အ​သေခံ တိုက်​ခိုင်း​နေကြတာ ။
တောင်ပေါ်သား says: အခု ဒုက္ခများတဲ့ နေရာတွေဟာ
လိုင်ဇာ ၊ လောက်ကိုင် တရုတ်နယ်စပ်
မြန်မာငွေ သုံးမရတဲ့ မိုင်းလားကလည်း တရုတ်နယ်စပ်ပဲ ၊
လိုင်ဇာမှာ ဗမာစကား ကချင်စကားတွေ အဆင်ပြေသေးပေမယ့်
ဟို ၂ နေရာမှာက တရုတ်ပိုက်ဆံ တရုတ်စကားပဲ ၊
ကရင်ဘက်မှာက ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အတော်အေးသွားပြီ
မငြိမ်းချမ်းနိူင်သေးတာ ဒီတရုတ်နယ်စပ်တွေ ၊
ဘာကြောင့်လဲ ? ဒီမအေပေးတရုတ် ရှုပ်နေတာ ၊ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: ၂၂ရက်​​နေ့ည​နေက စစ်​ကား အစီး၂၀၀​ကျော်​နဲ့ စစ်​သည်​ ၄၀၀၀​ကျော်​ ထပ်​တိုး​ပေးပြီး ၂၇-၃- ၂၀၁၅ ​တော်​လှန်​​ရေး​နေ့ ကိုးကန့်​​ဒေသကို သိမ်းဖို့ အမိန့်​ထုတ်​ထားသည်​ဆိုပဲ ။ ဖွဘုတ်​သတင်းအရ​ပြောတာ​နော်​ ။ ​နောက်​သတင်း တစ်​ခုက သငန်း​ကျောင်းရှိတဲ့​နေရာ​တွေမှာ ညတိုက်​ပွဲ ​လေ့ကျင့်​ခန်း ​တွေ အဆက်​မပြတ်​ပြုလုပ်​​နေတဲ့ အတွက်​အနီးရှိလူများ ထိတ်​လန့်​​နေပါသတဲ့ ။
lu lu says: ယမ်းငွေ့ နဲ့အတူ ကျောင်းတွေပါပျောက်ကုန်မှာလား
kai says: ဦးနုက.. နိုင်ငံတော်ဘာသာကို ဗုဒ္ဓဘာသာပါလို့.. ထလုပ်လို့.. ကေအိုင်အေမွေးဖွားပြီး.. ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေတော်လှန်ရေးစခဲ့ရဖူးပြီ…
အခုကလည်း.. ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေက.. မြစ်ဆုံအရေးကို သွားစွက်ဖက်တာကစတာပါ..။
ကျုပ်အထင်မမှားရင်.. ..ဒီတခေါက်လက်မည်းက.. စီအိုင်အေဗျ..။ အချိန်ဇယား Timeline လေးများဆွဲကြည့်စေချင်..။
New outbreak of violence in 2011-2012
See also: 2011–2012 Kachin Conflict
In 2011 General Sumlut Gun Maw confirmed the renewal of fighting in the state of Kachin for independence. One of the new reasons for ending the ceasefire was the creation of the Myitsone Dam, which requires the submergence of dozens of villages in Kachin state.
The 2011–2012 Kachin Conflict in 2011 had displaced between 35,000 and 75,000 people and killed hundreds.
ခင်ဇော် says: ငြိမ်းချမ်းရေး အကြောင်း ပြောနေရသ၍ မငြိမ်းချမ်းသေးဘူးဆိုပဲ။
Alinsett@Maung Thura says: အနာဂတ်အတွက် ပြာကို ကုန်ကြမ်းလုပ်ပြီး ထုတ်လုပ်မယ့် ပစ္စည်းစက်ရုံတွေ လျာထားရင်ကောင်းမယ်
တောင်ပေါ်သား says: အခုထိ တိုက်နေတုန်းပဲ တဲ့ ၊
ဒုက္ခသည်တွေကို သနားတာ ၊